बिप्लवको बम : ओलीको गोली
प्रचण्ड र ओली चुनावपछि नेपालमा स्थिरता र समृद्धिको युग आउने बताइरहेका छन् । त्यसको आधार भनेको चुनावमा वाममोर्चाले ल्याउने दुईतिहाई वा बहुमतको जनाधार र ५ वर्षे स्थिर सरकार भनेका छन् दुबैले ।
तर चुनाव हुन दिदैनौं भनेर नेकपा माओवादी, विप्लवका कार्यकर्ताहरुले तीब्र गतिमा उमेदवार लक्षित गरेर बम विस्फोट गराइरहेका छन् । ओली विप्लवलाई बच्चा सम्झाएजसरी सम्झाउँदै पनि छन्, सरकार विप्लवसँग मिलेर बम पड्काउँदैछ भन्ने आरोप पनि लगाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा चुनावपछि मै हो प्रधानमन्त्री भनेर चिच्याइरहेका छन् ।
विप्लवको बम र ओलीको गोली, आमनेसामने छ । यो बम र गोलीको प्रतिस्पर्धामा चुनाव रोकिएला भन्ने विश्वास कसैलाई पनि छैन । कसले बहुमत अथवा दुई तिहाई ल्याउँछ, यसको फैसला जनताले गर्ने हुन् । त्यसका लागि दुईचरणको चुनाव परिणाम कुर्नैपर्छ । सत्य के पनि हो भने वाम मोर्चा बनेपछि कांग्रेसमा भुइँचालो गएको छ । दक्षिणी र पश्चिमा मुलुकहरुसमेत यो वाममोर्चाबारे चिन्ता प्रकट गर्दै उत्सुकताको नजरले हेरिरहेका छन् ।
एकापसमा रिसारिसमात्र होइन, लिङ्ग सोध्नेजस्तो तिक्ततामा देखिएका माओवादी र एमाले मिल्नु भनेको नेपालमा आश्चर्य नै हो । यो आश्चर्यले चुनावी परिणाम आश्चर्यजनक ल्याउला किन नल्याउला विश्लेषण सुरु भएको छ । कति ठूला नेताले चुनाव हार्लान्, कति साना र अपत्यारिलाले चुनाव जित्लान्, यसै भन्न सकिन्न । जनताको फैसला हो, गर्छन्, तर जनताले सन्तुलन र नियन्त्रण गर्न जानेका छन् भन्ने आधारहरु भने धेरै नै छन् । जनता जनार्दन न हुन् ।
प्रचण्डको हुंकार छ– ‘हामी कम्युनिष्ट मिल्दा कांग्रेसका नेताहरु आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन । तपाईहरु पनि महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरुलाई मिलाउनुस् । नेपालमा धेरै पार्टी आवश्यक छैन ।’ ओली भन्छन्– अस्थायी सरकारले गरेका निर्णय चुनावपछिको सरकारले रद्द गर्छ, नयाँ निर्णय गरेर अघि बढ्छ । जनयुद्धका घाइतेको गोली हामी निकाल्छौं । अव सुरु हुन्छ असली समाजवाद ?
कतै बम, कतै गोली, यसरी प्रचण्ड र ओलीको चक्रव्यूहको तैयारी, नेपाली राजनीतिले यू टर्न लिन लागेकै हो त ? व्यापक विश्लेषण सुरु भएको छ ।